သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၈-၃) ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
မြင်းခြံကျောင်းသားနှင့်ပြည်သူ ၅ ဦးကို ပုဒ်မ ၃ ခုဖြင့် အမှုဖွင့်
စစ်ဖိနပ်အောက်မှ မလွတ်သေးပါ … ထူးခြားလာသည်က ဗြောင်လိမ်ခြင်း ဖြစ်သည် – ကျော်ကျော်မင်း
သြော် ဟုတ်လား ဒါနဲ့ . . ပြောရအုံးမယ် ဟဲ . ဟဲ . ဟဲ – လင်းယုန်ရေးသည်
ကျောင်းသားများကို ပြန်လွှတ်ပေးရန် ဆန္ဒပြသည့် ကဗျာဆရာ ဖမ်းဆီးခံရ
တော်လှန်ရေးနေ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေ အတွင်း ၈ ဦးဖမ်းဆီးခံရ
လန်ဒန်ရောက် မြန်မာတွေ တော် လှန်ရေးနေ့ ဆန္ဒပြ
ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးဟာ မပြီးဆုံးသေးဘူးလို့ ကျော်ကိုကို ပြော (ရုပ်/သံ)
သိမ်းဆည်းမြေ ပြန်ရရေး ရခိုင်မှ တစ်ကိုယ်တော် ဆန္ဒပြသူ ထောင်သုံးလ ချမှတ်ခံရ
Houthi သူပုန်ကို ဆော်ဒီ တိုက်ခိုက်တာကို အီရန်ရှုတ်ချ
သူပုန်​တွေ​ဝင်​စီး​ထား​တဲ့ ဆို​မာ​လီ​ယာ​မြို့တော်​က ဟိုတယ်​မှာ တိုက်​ပွဲ​ဖြစ်
ဘို​ကို​ဟာ​ရမ်​တွေ​ရဲ့ ဌာန​ချုပ်​ကို ဖျက်​စီး​နိုင်​ခဲ့​ပြီ​လို့ နိုင်​ဂျီး​ရီး​ယား စစ်​တပ်​ကပြော
တိုက်ပွဲများကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ အချည်းနှီးဖြစ်နေ
တရုတ်နယ်ထဲ မြန်မာဗုံး ထပ်ကျမကျ စစ်ဆေးမယ်
လားရှိုးမြို့က ကိုးကန့် လင်မယား အဆိပ်သောက် သေဆုံး
ဖုန်ကြားရှင် တပ်ဖွဲ့မှ လက်နက်များဖြင့် ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူ ရှစ်ဦးအား ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်
လက်နက်နဲ့ ဖိအားမပေးဖို့ ကာချုပ် သတိပေး
လက်နက်သုံးခြိမ်းခြောက်မဲဆွယ်မှု လက်မခံနိုင်ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် သတိပေး
ကျောင်းသားတွေ လွှတ်ပေးရေး ၁၁ မြို့မှာ ဆန္ဒပြတောင်းဆို
ကုလ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ ပြဋ္ဌာန်းချက် မြန်မာ ပယ်ချ
မြန်မာ​နိုင်ငံ​ဆိုင်​ရာ ဆုံးဖြတ်ချက် ကု​လ လူ့​အခွင့်​အရေး​ကောင်​စီ ဆုံးဖြတ်
အင်္ဂပူမြို့နယ်၌ မြေပြိုကျသဖြင့် လူလေးဦးသေဆုံး
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ ဟိန္ဒူ အချို့ လူပိ သေဆုံး
လေကြောင်းတိုက်မှု အမြန်ရပ်ဖို့ ယီမင် တိုက်တွန်း
ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ NLD ရုံးချုပ်မှာ ကျင်းပ
Posted: 28 Mar 2015 06:08 AM PDT
ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့က မြန်မာနဲ့ ထိုင်းအလုပ်သမား ၁၀၀ လောက်ဟာ ဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်က လုပ်ခလစာရှင်းပေးချင်းမရှိတဲ့ အတွက် မဲဆောက်မြို့ပိုင်ရုံးမှာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ မဲဆောက်မြို့မှာ ဖွင့်လှစ်ဖို့ ဆောက်လုပ် ပြင်ဆင်နေတဲ့ ရော်ဘင်ဆန် ကုန်တိုက်မှာ ဆောက်လုပ်ရေး အပိုင်း တာဝန်ယူတဲ့ ကန်ထရိုက်ဆီကနေ လုပ်ခလစာတွေမရလို့ ဆန္ဒပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန္ဒပြတဲ့ အလုပ်သမားတွေထဲမှာ အထောက်အထား လတ်မှတ်အပြည့်အစုံရှိတဲ့ မြန်
Posted: 28 Mar 2015 06:07 AM PDT
မတ်လ ၂၇ ရက် ဆန္ဒပြမှုအတွင်း ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ မြင်းခြံ ကျောင်းသားနဲ့ဝန်းရံပြည်သူ ၅ ယောက်ကို ပုဒ်မ ၃ ခုနဲ့ အမှုဖွင့် တရားစွဲပြီး မြင်းခြံထောင်မှာ ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ထားပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေဖြစ်ကြတဲ့ ကိုဉာဏ်မြင့်သန်းနဲ့ ကိုစည်သူမြတ်၊ ၀န်းရံသူပြည်သူတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဦးစိန်ဝင်း၊ မဖြူနဲ့ ကိုကျော်သန်းထွန်းတို့ကို ပုဒ်မ ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၅၀၅ (ခ) တို့နဲ့ အမှုဖွင့်လိုက်တာလို့ ဦးစိန်ဝင်းရဲ့တူ ကိုဝင်းနိုင်က ပြောပါတယ်။
Posted: 28 Mar 2015 12:47 AM PDT
ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်၏ ရွေးချယ်မှုဖြင့် ခန့်ထားသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းက ပြည်သူတို့ဖြစ်ချင်သော ဆန္ဒကို စွမ်းစွမ်းတမံ တားမြစ်နိုင်ဆဲဖြစ် … ပြည်သူ ၅ သန်းကျော် လက်မှတ် ရေးထိုးထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး အလုပ်မဖြစ်သေးသည်ကို ကြည့်လျှင် သိနိုင် … ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လတွင် အစိုးရသစ် တက်လာပြီးနောက် လအနည်းငယ်အတွင်း အင်မတ
Posted: 28 Mar 2015 12:45 AM PDT
ဒီပြောကြားချက်တွေဟာ မိဘပြည်သူများ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်း စိတ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံကြ ပါစေလို့ အဆုံးသတ်လေ့ရှိတဲ့ တစ်လတစ်ကြိမ် ပြည်သူလူထုကို ရွှေပြည်အေးစကားတွေပြောတဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ပြောစကားတွေလို့ ထင်ရက်စရာ မရှိပါဘူးခင်ဗျာ … ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ အဖြစ်ကတော့ဖြင့် ““မနေ့ကတော့ရောင်၊ ပိန္နဲပင် ထောင်ကာမှ၊ ခေါင်းပြောင် ရချည်ရဲ့လေး””ဆိုတဲ့ စကားပုံ လိုပဲခင်ဗျ။ ပြည်သူလူထြု
Posted: 27 Mar 2015 10:31 PM PDT
ဓာတ်ပုံ – အိမမမွန် ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ကျောင်းသားတွေ ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ပါဖောင့်မန့်တခု ဒီနေ့မနက် ၁၀ နာရီခွဲက ရန်ကုန်လှည်းတန်းမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပါဖောင့်မန့်ခေါင်းဆောင် ကဗျာဆရာထက်အောင်လင်းကို ကမာရွတ်ရဲစခန်းက ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ မတ် ၂၇ ရက်နေ့ကလည်း သာယာဝတီအကျဉ်းထောင်မှာ ဖမ်းဆီးတရားစွဲခံနေရတဲ့ ကျောင်းသားတွေနဲ့ ၀န်းရံသူတွေကို ချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မြင်းခြံ၊ မြောင်းမြ၊ ဟင်္သာတ၊
Posted: 27 Mar 2015 08:41 PM PDT
လက်ပံတန်းမြို့မှာ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်း သူတွေနဲ့ အားပေးကူညီသူတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ရန်ကုန်မြို့ မှာ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့က ဆန္ဒပြတောင်းဆိုကြစဉ်။ Photo : Kyaw Zaw Win, Kyaw Lwin Oo, Aung Ko Ko/RFA ဒီမိုကရေစီပညာရေးနဲ့ ဖမ်းဆီးထားသူတွေ ပြန် လွှတ်ရေးအတွက် နိုင်ငံအနှံ့မနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆန္ဒပြမှုတွေမှာ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်နဲ့ ပြည်သူ စုစုပေါင်း ၈ ယောက်အဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့က ဆန္ဒပြပွဲအြ
Posted: 27 Mar 2015 07:50 PM PDT
ကျောင်းသားသပိတ်စစ်ကြောင်းကို ရဲတပ်ဖွဲ့က အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲ ခဲ့တာကို ဆန့်ကျင့်တဲ့အနေနဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံ သားတွေ မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့က ဆန္ဒပြစဉ်။ Photo: Aye Hnin Nyo မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ အနှစ် ၇ဝ မြောက် ဖက်ဆစ်တော် လှန်ရေးနေ့မှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား တချို့က လန်ဒန်မြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးရှေ့ကို မနေ့နေ့လည် က သွားရောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားတွေကို မြန်မာအစိုးရက အကြမ်း
Posted: 27 Mar 2015 07:07 PM PDT
ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးဟာ မပြီးဆုံးသေးဘူးလို့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကျော်ကိုကိုက မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ တပ်မတော်နေ့မှာ ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ဒေါ်ခင်ရူပါ တင်ဆက်။ ရိုက်ကူး အိုင်စီဂျေ DVB TVonline
Posted: 27 Mar 2015 07:00 PM PDT
သံတွဲ၊ မတ်လ ၂၇ ငပလီ ပင်လယ်ကမ်းခြေမှ သိမ်းဆည်းခံထားရသော လယ်မြေများ ပြန်လည် ရရှိရေးအတွက် တစ်ကိုယ်တော် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုသူ ကိုစိုးဝေအား သံတွဲမြို့နယ် တရားရုံးက မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့က ထောင် (၃) လ ချမှတ်လိုက်သည်။ ကိုစိုးဝေအား သံတွဲမြို့နယ် တရားရုံးမှ ပုဒ်မ၁၈ဖြင့် ထောင် (၃) လ ချမှတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သူ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် တစ်ဦးမှ ပြောသည်။ ကိုစိုးဝေသည် ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်နေက Give Back Our Land စာသား
Posted: 27 Mar 2015 06:57 PM PDT
မြို့တော် လေဆိပ်ကို ဆော်ဒီ တပ်တွေ ဝေဟင်ကနေ တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ဆောင်နေကြစဉ် (Credit: Reuters) ရီမန်နိုင်ငံ ​အစိုးရကို ​ကူညီတဲ့အနေနဲ့ ​ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား ​နိုင်ငံက ​ရီမန် ​သူပုန်တွေကို ​ဝေဟင်ကနေ ​တိုက်ခိုက်တာကို ​အီရန်အစိုးရက ​ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ ဆော်ဒီအာရေးဘီးယားနဲ့ ​တခြား ​ညွန့်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာ ​Houthi ​သူပုန်တွေကို ​ဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ် ​ဝေဟင်ကနေ ​တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာြ
အယ်လ်ရှာဘတ် သူပုန်တွေ စီးနင်းထားတဲ့ ဟိုတယ်ကို ပြန်သိမ်းဖို့ ဆိုမာလီ အစိုးရတပ် ကြိုးစားနေ။ ဆိုမာလီယား နိုင်ငံ မိုဂါဒစ်ရှူး မှာ အယ်လ် ရှာဘတ် လက်နက်ကိုင် တွေ ဝင်ရောက် စီးနင်းထားတဲ့ ဟိုတယ် ကို ပြန်လည် ထိန်းချုပ် နိုင်ဖို့ ဆိုမာလီ အစိုးရတပ် တွေ တိုက်ခိုက် နေကြပါတယ်။ Maka al Mukarama ဟိုတယ် မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ တဲ့ ပစ်ခတ်မှု တွေ အတွင်း ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆိုမာလီယာ သံအမတ် အပါအဝင် လူ ၁၀ ဦး သေဆုံး ခဲ့ပါ
Posted: 27 Mar 2015 06:55 PM PDT
ဘိုကိုဟာရမ်တွေ က အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံ အဖြစ် ကြေညာထားတဲ့ ဂိုဇာမြို့ကို နိုင်ဂျီးရီးယား စစ်တပ်က ပြန်လည် သိမ်းယူ။ နိုင်ဂျီးရီးယား နိုင်ငံမှာ တော့ အစ္စလာမ်မစ် လက်နက်ကိုင် ဘိုကိုဟာရမ် တွေ ရဲ့ ဌာနချုပ် အဆောက်အဦ တွေ ကို ဖျက်စီး လိုက်နိုင်ပြီ လို့ အစိုးရ စစ်ဘက် က ပြောပါတယ်။ ဘိုကိုဟာရမ် တွေ ရဲ့ ထကြွ မှုကြောင့် ကျင်းပ ဖို့ နှောင့်နှေး နေခဲ့ရတဲ့ နိုင်ဂျီးရီးယား သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲ ဟာ ဒီကနေ့ ကျင်းပ မှာ ဖြစ်ပါတ
Posted: 27 Mar 2015 06:53 PM PDT
လတ်တလော တနိုင်ငံလုံး နေရာအနှံ့ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကို ချက်ခြင်းရပ်တန့်ပေးဖို့ ညီညွှတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖယ်ဒရယ် ကောင်စီ (ယူအန်အက်ဖ်စီ) က တောင်းဆို လိုက်ပါတယ်။ အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြား တနိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီမှုရရှိရေး ရန်ကုန်မှာ ကြိုးပမ်းဆွေးနွေးနေချိန် ရှမ်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာ မြေပြင်သာမက ဝေဟ
Posted: 27 Mar 2015 06:44 PM PDT
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင်ပင်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်က တွေ့ရစဉ် (Credit: Reuters) တရုတ်နိုင်ငံထဲကို ​မြန်မာဘက်က ​ဗုံးတွေ ​ထပ်မံ ​ကျရောက်မှု ​ရှိမရှိ ​စုံစမ်းနေတယ်လို့ ​တရုတ်နိုင်ငံ ​ကာကွယ်ရေး ​ဝန်ကြီးဌာနက ​ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒီလအစောပိုင်းတုန်းကပဲ ​မြန်မာ ​လေတပ်ဘက်ကနေ ​ပစ်ချတဲ့ ​ဗုံးကြောင့် ​တရုတ် ​အလုပ်သမား ​ငါးယောက် ​သေဆုံးပြီးတဲ့နောက် ​သတိနဲ့ ​လုပ်ဆောင်ဖို့ ​တရုတ်က ​မြန်မာစစ်တပ်ကို ​သတိပေး
Posted: 27 Mar 2015 06:41 PM PDT
ဓါတ်ပုံ- ဆေးရုံရောက်မှသေဆုံးသည့်ဇနီးဖြစ်သူနှင့် နေအိမ်ကတည်းက သေဆုံးသည့်ခင်ပွန်းဖြစ်သူတို့၏ပုံ မတ်ခ်ျလ ၂၈ ရက် ၂၀၁၅ သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့၌ အဆိပ်ခတ်ထားသော အရက် သောက် မိသည့် ကိုးကန့် လူမျိုး လင်မယား သေဆုံးခဲ့ သည့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ေ ကြာင်း သိရသည်။ မတ်ခ်ျလ ၂၅ ရက်နေ့ ညနေပိုင်း လားရှိုးမြို့ ရက်ကွက် (၁) ကျောက်တောင် အပိုင်း၌ နေထိုင်သည့် အသက် ၆၂ နှစ်ရှိ အမျိုးသားနှင့် အသက် ၃၃ နှ
ဖမ်းဆီးရမိစဉ်က လက်နက်ခဲယမ်းများ။ ဓါတ်ပုံ - MOI လားရှိုး မတ် ၂၇ ဖုန်ကြားရှင်တပ်ဖွဲ့မှ လက် နက်ခဲယမ်းများနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း ဝင်ရောက်လာပြီး ပြစ်မှု အမြောက်အမြား ကျူးလွန်ခဲ့သူ တရုတ်နိုင်ငံသား ရှစ်ဦးအား ၎င်း တို့ကျူးလွန်ခဲ့သော ပြစ်မှုအချို့ အတွက် တရားရုံးအသီးသီးက ထောင်ဒဏ် (၂၅) နှစ်စီ ချမှတ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည့်အပြင် ဓားပြမှု၊ လူသတ်မှု များအတွက်လည်း လားရှိုးခရိုင်တရား ရုံးက မတ် ၂၆ ရက်တွင် ထောင်ဒဏ်
Posted: 27 Mar 2015 06:40 PM PDT
နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ တပ်မတော်နေ့ စစ်ရေးပြ အခမ်းအနား နှစ်ပေါင်း ၇၀ ပြည့် တော်လှန်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်း အနားတွေကို ရန်ကုန်နဲ့ နယ်မြို့တချို့မှာ ကျင်းပခဲ့ကြ ပါတယ်။ နေပြည်တော်မှာ တော့ တပ်မတော်နေ့ စစ်ရေးပြ အခမ်း အနား ကျင်းပခဲ့ပြီး ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က မိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်။ သူ့မိန့်ခွန်းထဲမှာ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာ တပ်မတော်ရဲ့ အခန်း
Posted: 27 Mar 2015 06:35 PM PDT
၂ဝ၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့က တပ်မတော်နေ့ အခမ်းအနားမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ်။ Photo: RFA လာမယ့် နိုဝင်ဘာလဆန်းမှာ ကျင်းပမယ့် ၂ဝ၁၅ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲမှာ လက်နက်နဲ့ ခြိမ်းခြောက် ပြီးမဲဆွယ်တာကို လက်ခံမှာ မဟုတ်ကြောင်း တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ဒီနေ့ကျရောက်တဲ့ အနှစ် ၇ဝ မြောက် တပ်မတော်နေ့ အခမ်းအနားမှာ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။ နေပြည်ေ
လက်ပံတန်းမြို့မှာ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်း သူတွေနဲ့ အားပေး ကူညီသူ တွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ရန်ကုန်မြို့ မှာ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့က ဆန္ဒပြတောင်းဆိုကြစဉ်။ Photo : Kyaw Zaw Win, Kyaw Lwin Oo, Aung Ko Ko/RFA လက်ပံတန်းမြို့ကျောင်းသား သပိတ်စစ်ကြောင်းကို ဖြိုခွဲစဉ်က ဖမ်းဆီး ခံထားရတဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်း သူတွေနဲ့ အားပေး ကူညီသူတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ တောင်ငူ၊ မြင်းခြံ စတဲ့မြို့နယ် ၁၁ြ
ဂျီနီဗာမှာ ကျင်းပတဲ့ (၂၈)ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီ အစည်းအဝေးမှာ မြန်မာကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်ဝေ တက်ရောက်။ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီရဲ့ ၂၀၁၅ခုနှစ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မြန်မာအစိုးရက ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ မတ်လ (၂၇)ရက်နေ့က ဂျီနီဗာမှာ ကျင်းပတဲ့ (၂၈)ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ကုလသမ
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီ ရဲ့ ၂၈ ကြိမ်မြောက် အဟစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက် ကို မြန်မာ အစိုးရ က တုန့်ပြန် ဝေဖန်။ ဂျနီဗာ မှာ မနေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကုလ သမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီ အစည်းအဝေး မှာ မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲ့ လူ့ အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ အခြေအနေ တွေ နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ဥရောပ သမဂ္ဂ အီးယူ ကနေ တင်သွင်း တဲ့ အစီရင်ခံစာ ကို ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့ ဆုံးဖြတ်ချက် အရ မြန်မာ နိုင်ငံ အတွက် ကုလသမဂ္ဂ ရဲ့ လူ့အခွင့်အေ
Posted: 27 Mar 2015 05:47 PM PDT
ဟင်္သာတ မတ် ၂၇ အင်္ဂပူမြို့နယ် အုပ်ရှစ်ကုန်းအုပ်စု ပန်းတိမ်ကျေးရွာနေ ဦးအောင်မျိုး ပိုင်ဆိုင်သော မြေနီတောင်မှ မြေနီများ တူးဖော်သူလေးဦးသည် ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီခွဲခန့်က အနားယူနေစဉ် မြေပြိုကျသဖြင့် မြေကြီးများပိပြီး လူလေးဦး သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ မြေနီတောင်မှ မြေနီများအား ဦးဇော်မိုးပါ ခြောက်ဦးအဖွဲ့က နေ့စားအလုပ်ဖြင့် တူးဖော်ခဲ့ရာ အခင်းဖြစ်ပွားချိန်၌ အနားယူနေစဉ် မြေပြို ကျပြီး မြေကြီး
Posted: 27 Mar 2015 05:36 PM PDT
ရေချိုးဆိပ်ကို ဆင်းတဲ့ လမ်းကျဉ်းမှာ အနည်းဆုံး ၁၀ ဦး လူပိ သေဆုံး။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ၊ ဒါကာမြို့ တောင်ပိုင်းက ဟိန္ဒူ ရေချိုးပွဲတော် တစ်ခုမှာ လူတွေ အချင်းချင်း ပိမိပြီး အနည်းဆုံး ၁၀ ဦး သေဆုံး သွားတယ်လို့ ရဲတွေက ပြောပါတယ်။ Astami Snan ပွဲတော် အတွင်း ဗြဟ္မပုတြ မြစ်မှာ ရေချိုးဖို့ သောင်းနဲ့ချီတဲ့ လူတွေ စုဝေး ရောက်ရှိစဉ် မြစ်ဆိပ်ကို ဆင်းတဲ့ လမ်းကျဉ်း တစ်ခုမှာ လူတွေ ပိမိခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သေဆုံး
Posted: 27 Mar 2015 05:33 PM PDT
ယီမင် သမ္မတ သစ္စာခံ တပ်တွေနဲ့ ဟွတ်သီ သူပုန်တွေကြား တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ရှိနေ ယီမင် နိုင်ငံမှာ ဟွတ်သီ သူပုန်တွေကို တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ဆော်ဒီ အာရေဗျ ဦးဆောင်တဲ့ လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုတွေကို အမြန်ဆုံး ရပ်တန့် သင့်တယ်လို့ ယီမင် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးက ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဟွတ်သီ သူပုန်တွေရဲ့ ရှေ့တိုး စစ်ဆင်မှုတွေကို တားဆီးနိုင်ပြီ ဆိုတာနဲ့ ရက်ပိုင်း ဒါမှမဟုတ် နာရီပိုင်းအတွင်း ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ရပ်ဆိုင်း
Posted: 27 Mar 2015 05:27 PM PDT
၂ဝ၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့က ၇ဝ ပြည့် ဖက်ဆစ်တော် လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD က ရန်ကုန်မြို့မှာ ကျင်းပစဉ်။ Photo: Thiha Tun/RFA ဒီနေ့ ကျရောက်တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၇ဝ ပြည့် ဖက်ဆစ်တော် လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD က ရန်ကုန်မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ‘တပ်မတော်နဲ့ပြည်သူ တစ်သားတည်းရှိမှသာ တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းမယ်၊ တိုးတက်မယ်’ လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်း